जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साद्वारा एक महिलाको उद्धार – Ankush Daily
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साद्वारा एक महिलाको उद्धार
On २१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ००:५०
वीरगंजमा अलपत्र रहेका एक महिलालाई उद्धार गरीएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको टोलीले वीरगंजको सडक पेटीमा बेवारिसे अवस्थामा रहेकी करिब ५० वर्षकी महिलाको बुधवार उद्धार गरेको हो । प्रहरी टोलीले ती महिलालाई नारायणी अस्पतालमा लगेर उपचार गराईरहेको छ । प्रहरी टोलीले नारायणी अस्पतालमा पुर्‍याए पश्चात अस्पतालका ईमरजेन्सी वार्डका डा। महमद सहाबुदिन र डा. दिपक चौरसिया लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुले उपचार सुरु गर्नु भएको छ ।
सो महिलाको नाम, ठेगाना हाल सम्म खुल्न नसकेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । सो महिलाको नारायणी अस्पतालमा उपचारको लागि भर्ना गरिको छ । सडक पेटीमै बस्ने गरेकोले लामो समय देखि भोकै रहेको, जिउभरी खटिराहरु निस्केको र थप उपचारको क्रममा समस्याहरु पत्ता लगाई उपचार गर्ने डा. सहाबुदिनले बताए । डा. चौरसिया र सहाबुदिनले आफ्नो निजि खर्चबाट सो महिलाको बुधबार देखि नारायणी अस्पतालमै राखी उपचार गरिरहेको डा.चौरसियाले बताए ।
सो महिलाको बुधबार राती स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर भए पनि बिहिवार बिहान देखि स्थास्थ्यमा सुधार आएको डा. चौरसिया र सहाबुदिनले बताउनु भयो ।
हाल वीरगंज स्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत्त डाक्टरहरुले सामाजिक कार्यमा अग्रसर भएको देखिएको छ । बिगत केही हप्ता पहिले पनि एक अलपत्र अवस्थामा रहेका पुरुषको डा. चौरसियाकै पहलमा अस्पताल पुर्‍याई उपचार गरिएको थियो ।